Akhriso: Soomaalida geerida u bareera si ay u guursadaan:- Waa warbixin murugo badan | kowtharmedia.com
Home WARAR Akhriso: Soomaalida geerida u bareera si ay u guursadaan:- Waa warbixin murugo badan
Akhriso: Soomaalida geerida u bareera si ay u guursadaan:- Waa warbixin murugo badan
Jun 21, 2017WARAR
” Waxaan ku ogaaday in ay dhinteen, kadib markii la ii soo sheegay in maydkooda laga soo saaray baabuur ay ku safrayeen oo marayey saxaraha Libya iyo Sudan”,ayay tiri iyadoo oynaysa, gacantana ku haysa sawirradii ugu dambeeyay ee carrurteeda saxaraha ku dhintay.
“Waxaan qorshaynayey in wiilku uu guursado marka uu jaamacadda dhameeeyo” ayay tiri, iyadoo ilinta iska tireysa, waxayna raacisay ”waxaan u malaynayaa in uu qaaday hammi ah sidii uu anaga waalidkiis ah iyo gabadha aan u doonay uu wax ugu soo qaban lahaa”
Da’yarta ayaa ku haminaya in ay noloshooda wax ka badelaan, guurkuna wuxuu ka mid yahay arrimaha ay maanka ku hayaan.
”Guurka qaaliga ah ayaa sabab u ah tahriibka dhalinyarada qaar. Hablaha ma doonayaan inamo aan dhaqaale heysan. Sidaas darted ayaa iyagoo dhaqaale doon ah ay dibedda u tahriibaan dhalinyarda” ayay tiri gabar wax ka barata iskuulka Faarax Omaar.
”Waxaan uga sheekaynaa qatarta laga la kulmo tahriibka,” sidaasi waxaa yiri Siciid Cabdi Shiil oo ah maamulaha dugsiga.
”Waxay u tahribaan sidii ay uga gun-gaari lahayeen arrimo ay ka mid yiiin guurka” ayuu raaciyey.
Magaalada Hargeysa waxaa caan ka ah nooc tagaasida ah oo loogu magacdaray ”Hooyo ha tahriibin” wuxuu magaacaasi ka dhashay dadaalka ay waalidiinta qaarkood ku doonaya inay ka joojiyaan carruurtooda safarka khatarta badan.
”Waan ku faraxsanahay in aan isaga haray tahriibka” Sidaasi waxaa yiri Maxamed Ismaaciil oo 25 sano jir ah kana mid ah da’yarta ka faa’iideystay fursadaha ay siiyeen waalidkood. Waxaan ku shaqeystaa mid ka mid ah takaasida loo bixiyey ”Hooyo ha tahriibin”.
Maxamed Ismaaciil oo waa taksiile wata gawaarida loo bixiyay ”Hooyo ha tahriibin”
” Waxaan kula talin lahaa da’yarta in ay maskaxdooda ka shaqeysiiyaan, oo ay isga haraan tahriibka, waayo halkan waxa jira fursado badan” ayuu yiri.
Previous PostDaawo Sawirro: Ra'isul wasaaraha soomalia oo markii ugu horeysay shir guddoomiyay Kulanka Maamulka Gobolka Banaadir Next Post14 ruux oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii muqdisho ka dhacay oo sacuudiga loo qaaday